3D mifananidzo paLinux? Ehe ... Dhizaini software | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Graphics, Resources
Kune vazhinji vashandisi vanozvigadzira yavo dhizaini ye 3d mifananidzo nenzira yeamateur kana avo vakazvipira kwairi nenzira yehunyanzvi. Vamwe vanhu vanotenda kuti kushanda nemhando idzi dzekugadzira iwe unofanirwa kuve neWindows komputa kana Mac muhofisi mako. Asi hapana chiri kumberi kubva pachokwadi, kune yako GNU / Linux distro pane zvakanyanya kunaka software.
Muchokwadi, chikuru nyanzvi dzezvidzidzo Ivo vakashandisa yemahara software senge inonakidza uye ine simba Blender. Inoshanda senge Nzou Kurota, Big Buck Bunny, Sintel, Misodzi Yesimbi, Caminandes, Cosmos Laundromat, Girazi Hafu, uye yakareba etc. 0.
1 Chii chinonzi 3D animation?
1.1 … Nhoroondo diki
1.2 Nezve 3D animation
1.3 Mhando uye maitiro
1.4 Dhizaini dhizaini
2 Software ye 3D animation pasi peLinux
3 Dzidza 3D mifananidzo
Chii chinonzi 3D animation?
Kuziva chimwe chinhu nezve 3D animation, kutanga unofanira kuziva chimwe chinhu nezvekwakabva ...
… Nhoroondo diki
3D kuchangamuka chirango mukati mekugadzirwa izvo yakatanga muna 1972, Edwin Catmull mudiki naFred Parke pavakagadzira yekutanga 3D animation. Iyo nguva iyo yechinyakare mifananidzo yaive ichisvika kumagumo uye mairi iyi nzira nyowani yakaunza mweya mutsva, ichizvishandura kuita humambo hukuru hweyekuona kwemaindasitiri.
Muchokwadi, Ed Catmull anga atanga kushandira Lucas Firimu, kwaakapa kune zvimwe zvinoonekwa zveStar Wars. Asi kurota kwake kwaive kushandisa matekinoroji e3D kuti ataure nyaya dzake, saka muna 1986 yakavambwa Pstrong pamwe naAlvy Ray. Uye isu tese tinoziva kubudirira kukuru kwemafirimu akabuda muma studio aya, seToy Story, Monsters, Cars, Bugs, Nemo, nezvimwe.
Nezve 3D animation
La echinyakare kupopota hunyanzvi hwekupa manzwiro ekufamba kuburikidza nemifananidzo ichiripo. Izvi ndizvo zvinoshandiswa pamakatuni ekare, kana anime (mhando yakasarudzika yeakajeka eJapan maficha). Kutora dudziro iyi kuverengera, 3D animation ihwohwo hunyanzvi hunotsvaga zvakafanana, chete iine matatu-mativi mifananidzo nechinangwa chekugadzira akateedzana, mabhaisikopo, mitambo yemavhidhiyo, kushambadza, akakosha mhedzisiro yemamuvhi, chaiyo chaiyo, yakawedzera kana yakavhenganiswa chokwadi, sainzi kufananidza, nezvimwe.
Kuti izvozvo zvigoneke, software inodiwaanokwanisa kudhirowa iwo magirafu uye kuita akateedzana ekuverenga zvichienderana nejometri fungidziro uye matatu-mativi nzvimbo dzekugadzira aya maficha.
Mhando uye maitiro
Kune akati wandei mhando dze 3D animation kana maitiro. Iwo makuru ndeaya:
Realist: Kubatanidza 3D animation neCGI (Computer-Yakagadzirwa Mifananidzo) uye zvinoonekwa kana VFX, unogona kuwana mifananidzo chaiyo inoshandiswa kune mamwe mafirimu kana mitambo yemavhidhiyo. Semuenzaniso, inoshandiswa mumafirimu mazhinji akadai saIshe weRings, Avatar, nezvimwe.
katuni- echinyakare 2D makatuni anogona zvakare kugadzirwa uchishandisa 3D mifananidzo kuti uwedzere imwe nhanho kwairi uye nekuipa iwo wakawandisa uye wechokwadi kutaridzika. Semuenzaniso, iyo Angry Birds bhaisikopo.
Snappy: inzira yakasarudzika ye3D yehupenyu, mune mamwe mavara evatambi akawedzeredzwa uye magadzirirwo akareruka. Maitiro aya anoshandiswa zvakanyanya mune mamwe mafirimu, senge Hotera Transylvania.
Kunge chero dhizaini, 3D animation ine zvimwe matanho akakosha iyo pfungwa inozoshandurwa kuita 3D animation. Iwo matanho anowanzo kuve:
Kugadzirira: paunenge uine zano uye chinyorwa, unotanga kudhirowa mifananidzo yezvichave zviri mavara kana zvinhu. Iyi nhanho inopera nekugadzirwa kwebhodhi renhau, ndokuti, iro bhodhi renhau.
Kugadzirwa: nezvose zviri pamusoro, dhizaini inotanga kugadzirwa nekombuta uchishandisa software. Mukati meichi chiitiko pane matanho akati wandei, akafanana nezvinoitwa nekadhi rakajeka kana GPU paunogadzirisazve mifananidzo:
Modelling: izvo zvinhu kana mavara ezviitiko kana ekufananidza akagadzirwa mumatatu matatu.
Zvishandiso uye zvigadzirwa: apa aya mamodheru anopiwa musimboti kana mhando yezvinhu. Izvo zvinovapa iwo mavara uye zvivakwa zvemifananidzo. Semuenzaniso, kana akagadzirwa nesimbi, anogona kunge aine akateedzana ekuratidzira kwechiedza, kana iwo anogona kunge ari pachena zvinhu, nezvimwe.
Iluminación: ndiyo nhanho uko iko kuenzanisa kwechiedza kunogadzirirwa zviitiko. Semuenzaniso, kana paine mwenje wemagetsi, kana kana chiri chiitiko pasi pezuva, nezvimwe.
Mhuka: ndiyo nhanho iyo software inoshandiswa kupa kufamba kune izvo zvinhu kana mavara akagadzirwa. Zvichienderana nerudzi rwezvinhu, inogona kuve yakaremara kana kufambiswa pamwe nezvimwe zvinokanganisa kana zvimwe. Semuenzaniso, kana iri fluid semvura, ichave iine kunyanya kufamba uye maitiro.
Render: Iyi ndiyo nzira inorema, apo mapurazi evharesi kana supercomputing anodiwa kuti aumbe kuverenga kuti agadzire ekupedzisira 3D animation. Nekudaro, kana chiri chekufananidza kana chipfupi chinogona kuitwa neyakajairwa PC ... Asi, semuenzaniso, Pstrong anoshandisa vane simba makomputa makuru emafirimu ayo.
Post-kugadzirwa: iyo yakashandurwa mifananidzo inotorwa uye inodzokororwa, kurongedzwa, kupfuura mamwe mafirita, mimwe mhedzisiro inowedzerwa, uye mhedzisiro yekupedzisira inowanikwa.
Software ye 3D animation pasi peLinux
Kana iwe ukafunga kutanga ne 3D animation muGNU / Linux, iwe unofanirwa kuziva kuti ivo varipo mamwe anotonhorera software mapakeji iyo yekutanga uye kugadzira mabasa ehunyanzvi.
Nhamba ye zvirongwa zvakanaka kwazvo ye 3D mifananidzo paLinux ndeiyi:
Blender: Ndiyo chirongwa chakanakisa cheiyo 3D animation iripo yeLinux uye inodikanwa neruzhinji. Iyo ine injini ine simba yekushandira kuti ishande pamwe neiyo CPU neGPU yekumhanyisa maitiro, chimiro chakazara chizere nematuruji e3D uye 2D modelling, magetsi, zvishandiso, mabasa eVFX, zvishandiso zvemifananidzo uye kubiridzira, nezvimwe.
Mapapiro 3D: ndechimwe cheanenge aripo maturusi ehunyanzvi, nekwanisi yekuenzanisira, kuvhenekesa, zvishandiso uye magadzirirwo, kunyangwe iyo isingatsigire maitiro ehupenyu pachayo.
K-3D- Chimwe chishandiso chemahara senge chiri pamusoro icho iwe chaunogona kunyora kubva kunobva kodhi. Chishandiso chine simba chevanyori vane modelling uye yehupenyu kugona. Uye zvakare, inochinjika uye inokutendera iwe kuti uwedzere nyowani kugona nekuda kweku plugins.
Dzidza 3D mifananidzo
Kana iwe uchizvifarira uye iwe uchiri kusaziva kuti unogona sei tanga kudzidza nezve 3D animation, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvakawanda zviwanikwa zvekudzidza. Kunge zvimwe zvinonakidza degree muopopayi, online tenzi, makosi ekudzidzisa, emanyorero, nezvimwe. Navo iwe uchatanga kubva pakutanga uye iwe unowana yakakwira nhanho yezviitiko kuti uite zvakanyanya kuomarara basa.
Aya marudzi emakosi ekudzidzisa anowanzo kukupa iwe nehunyanzvi hwekutanga hunodiwa kuti utange kufamba mukati mepasirose yekugadzira uye 3D animation. Senguva dzose, ivo vachakudzidzisa iwe ku:
Shandisa software ye3D animation neese ayo mashandiro uye maturusi.
Kugona kudhirowa chero mhando dhizaini, ipe kufamba uye upe kutaura nyaya (audiovisual narratives) kana kuita simulation.
Natsiridza hunyanzvi hwako hwekugadzira kuti uite mapurojekiti matsva.
Shanda mamwe madiro ekuwedzera anodikanwa, nezvimwe.
Ndiani anoziva? Pamwe ndiwe unouya wekusimudzira weimwe yakakosha bhaisikopo 3D mifananidzo. Ndinoziva vamwe vanhu vari kushanda muVFX nemifananidzo, uye pavakatanga kudzidza havangambofungidzira kuti vakapedzisira vashanda kana mapurojekiti ane mukurumbira avakapa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » 3D mifananidzo paLinux? Eheka…
Zvikoro Linux 6.9: kuburitswa kutsva kwedistro yedzidzo